Ikhaya leHolide laseGiorgio - 3BD - 400m ngaselwandle - I-Airbnb
Ikhaya leHolide laseGiorgio - 3BD - 400m ngaselwandle
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguΓιωργος
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uΓιωργος iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indawo yokuhlala entle eLeptokarya Pieria, "etshone" kwiiyadi eziluhlaza, ikulindele ukuba ukonwabele iiholide zakho zasehlotyeni. Kumgama weemitha ezingama-400 ukusuka elwandle, inokuhlala ukuya kuthi ga kwi-7 abantu, inekhitshi esebenza kakhulu, igumbi lokuhlambela elikhululekile, indawo yokupaka yabucala kunye neeyadi ezimbini ezinkulu kakhulu, enye yabucala kwaye enye eqhelekileyo kunye nabanini apho unokonwaba khona. ikofu yakho, ukutya, ukutshiswa lilanga kunye namaxesha okuphumla aya kuhlala engalibaleki. Sikulindile!
Le ndlu ibekwe phakathi kweentendelezo eziluhlaza kunye nemithi yayo eyahlukeneyo ikunika ukuzola kunye nokuzola. Ifenitshala ekhethwe ngononophelo isondela kwisitayela esilula kodwa sanamhlanje. Indawo ikhanyiselwe ngokukodwa kwaye iifestile ezinkulu zizisa ilanga ngaphakathi. Ikhitshi esebenzayo igubungela zonke iimfuno kwaye igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngokupheleleyo. Ukukhululeka kakhulu abantu aba-6 banokuba sisi-7 bajike igumbi lokuhlala libe yibhedi kwaye nokuba nosana kunokugqityezelwa ngebhedi yomntwana.
Iveranda enkulu enezityalo ezininzi iyakwamkela kwigumbi layo lokuhlala elitofotofo apho unokonwabela isidlo sakho sakusasa okanye ikofu.
Indlu yam ikwimitha engama-400 ukusuka elwandle nangasemva kwePoseidon Pallas Hotel. Ulwandle luhambo lwemizuzu eli-10. "Ikhaya laseGiorgio" liphakathi kweelwandle zaseLeptokarya kunye neSkotina ngaphakathi kwemizuzu eli-10. Ngenxa yoko, unokufikelela kuzo zombini iindawo kwiindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, ikhemesti nayo yonke into oyifunayo ngexesha lakho leholide.
Umbuki zindwendwe ngu- Γιωργος
Ndiyafumaneka kuwo nawuphi na umbuzo kunye naluphi na uncedo oludingayo.
Inombolo yomthetho: 00000764474